အခြေခံ အဂ်လိပ် စကားပြော✔✔ အပိုင်း(1) 1 to 12 📕 Basic spoken english part(1) lesson 1 to 12 2021 - Học giỏi tiếng Anh
အခြေခံ အဂ်လိပ် စကားပြော✔✔ အပိုင်း(1) 1 to 12 📕 Basic spoken english part(1) lesson 1 to 12
October 5, 2021 by pth 46 Comments
How to learn english,How to study english,အဂ်လိပ်စာလေ့လာကြမယ်,အဂ်လိပ် စကားပြောများ,English စာလေ့လာနည်း မြန်မာ,English Grammar များ,English vocabulries များ,အခြေခံ အဂ်လိပ် စကားပြော✔✔ အပိုင်း(1) 1 to 12 📕
Basic spoken english part(1)
Luyện kỹ năng nghe – nói Tiếng Anh (Tieng Anh6Part 1)
Phương pháp luyện nói tiếng Anh – Phần 1 (Engsub) [Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày]
Perfect Participle | Present Participle | Gerund in spoken English Course | N K Mishra Classes
Learn english with me-Burmese says
pls like &share.
Lil San Chit says
အခြေခံက စပြီး သင်ချင်လို့ပါဆရာ
Thin Myanmar says
ေက်းဇူးပါ ဆရာ က်မတို႔လိုအေျခခံအားနဲတဲ့သူေတြအတြက္အဆင္ေျပဆုံးပါ႐ွင္ ႀကိဳးစားပါမယ္႐ွင္
Miss John says
အသံတိုးလွန်းနေပါသည် ဆရာ ကောင်းစွာကြားချင်ပါသည်
Nyein Pyae says
ဆရာ သမီးenglish online class​​လေး​တွေတက်ချင်လို့ဒါမဲ့ဘယ်english online class​တွေကိုjoinရမှန်းမသိလို့အဲ့တာဆရာကူညီပါ့လားသမီးတက်သင့်တဲ့online class​လေး​တွေညွှန်းပါ့လားသမီးကအခု7တန်းတက်ရမယ့်သူပါဒါမဲ့ခုထိမတက်ရ​သေးဘူးအဲ့မို့သင်ပြီးစားenglishစာ​တွေ​တောင်​မေ့​နေပြီအဲ့မို့englishစာ​တွေပြန်သင်ချင်လို့ပါသမီးကenglishစာ​အားနည်းပါတယ်အဲ့မို့လို့english online class​တလး​တွေညွှန်း​ပေးြာ​နော်ဆရာ😟
u should be talked loudly i can't hear not very much. but is great thanks
u should be talk loudly i can't hear not very much 0_0.but is great
thet thet says
စကားစပ်ပြီးဘယ်လိုပြောရသလဲဆရာplase help me
English speakကိုအခုမှလေ လာမှာဆရာဘယ်ကစရမလဲ
Ahsi Mi says
Mee phyu zin Oo says
Han Ko Hein says
grade-4 စနစ္သစ္ english speaking သင္ခ်င္လို႔ပါ teacher
Zin War says
Aung Maung says
Lili Hleih says
သင်ကြားပုံလေးကိုကြိုက်တယ် ဆရာ ♥
EXO L says
ငတိုး ငပုတ် says
Shwe yati Phue says
Aung Aung says
Thank you so much ဆရာ
Naw Dar says
Ro. Aminnulhauqe says
Richh Blazee says
My daughter is very familiar with English now, thank you
Kaung Ma lay says
War War Win Naing says
ဆရာ Listening skill မေကာင္းဘူးဆရာ 😿😿4 skills လုံးပါပဲ ဆရာရယ္ English စာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Video ေလးေတြ မ်ားမ်ားသာ တင္ေပးပါဆရာ ေလ့လာပါ့မယ္ေနာ္
Alicia Lin says
Listing ကိုစာသားနဲ့တွဲလေ့လာရင်အဆင်ပြေပြီး စာသားမကြည့်ပဲအသံပဲနားထောင်ရင် သိပ်နားမလည်တာ ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲရှင့်
Ber Lin says
ဆရာ မေးစရာလေးရှိလို့ပါ getနဲ့တွဲသုံးတာလေးတွေသိချင်ပါတယ်
Lovely Rose says
Khine Zin says
English စာနဲ့ ပတ်သက်၍
comment မှ တဆင့် ပြောနိုငိပါတယ်။
Video file နဲ့ ေသချာရှင်းပြပါမည်။
Huawei Y7p says
Eh Saw says
Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư và các câu chuyện về nhân quả từ trang tâm đại bi chẳng hạn như long nguoi von tham sau kho luong hieu khong du at sinh lo nghi tin khong du at noi nhieu loi, bai hat len tren chua dung ngu guc thich thien xuan2những bài này chắc chắn rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.